काँग्रेसले तोक्यो १३ जिल्लाका लागि तोक्यो निर्वाचन अधिकृत, कुन जिल्लामा को ? |
Home राजनीति काँग्रेसले तोक्यो १३ जिल्लाका लागि तोक्यो निर्वाचन अधिकृत, कुन जिल्लामा को ?
काँग्रेसले तोक्यो १३ जिल्लाका लागि तोक्यो निर्वाचन अधिकृत, कुन जिल्लामा को ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आसन्न १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन हुन बाँकी १३ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।
यसअघि विभिन्न विवादको कारण १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लासहित वडा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका कैलाली, डोल्पा, बाँके, सुर्खेत र रसुवामा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका हुन् ।
काँग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कैलालीमा यसअघि नै टेकप्रसाद सुवेदीलाई मतदान अधिकृत तोकिसकेको थियो ।
बाँकेमा रेवतीरमण भट्टराई, सुर्खेतमा मदन रेग्मी, रसुवामा सुमन कुमार केसी र डोल्पामा कुमारराज श्रेष्ठलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको निर्वाचन समितिले जनाइएको छ ।
यस्तै सप्तरीमा डा।रुद्र शर्मा, सिराहामा सन्जीव लामा, धनुषामा अरुण ज्ञवाली, महोत्तरीमा ईन्द्र अधिकारी, सर्लाहीमा विनोद कार्की, रौतहटमा दीपकराज गिरी, पर्सामा नरेन्द्र केसी र बारामा ज्ञानेन्द्रपसाद अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृत बनाएर पठाइएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरु कात्तिक २२ गते तोकिएको जिल्लामा जापुग्ने निर्वाचन समितिले जनाइएको छ ।
यस्तै एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा मंसिर ६ र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा मंसिर १० गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । मंसिर १६ र १७ गते सात वटै प्रदेशको अधिवेशन हुने छ । उक्त कार्यतालिका प्रभावित नभए मंसिर २४–२६ मा काँग्रेसले १४ औं महाधिवेशन गर्ने छ ।